DAAWO: Safarka Deni ee Kismaayo DFS, ma dharbaaxo Siyaasadeed ayuu ku yahay?
MUQDISHO(P-TIMES)- Madaxweynaha iyo Raysalwasaaraha Soomaaliya waxay 72 saac ee lasoo dhaafay dadaal nooc kasta oo uu yahay ay ku bixiyeen sidii ay u baajin lahaayeen safarka Madaxweynaha Puntland uu ku tagay magaalada Kismaayo, oo uu kaga qeybgalayo Caleema-saarka dhigiisa Jubbaland Axmed Madoobe.
Madaxweynaha Puntland wuxuu tagay Kismaayo, iyadoo aysan diyaaradiisu marin magaalada Muqdisho, taas oo ka dhigan in ay sicad u jabiyeen amarkii ay horey u soo rogtay Xukuumadda Faderaalka Soomaaliya.
Sidaas oo kale, is heynta Jubbaland iyo madaxda dawladda Faderaalka, hadda waxaa kusiyaaday oo soo korortay jiho cusub oo Puntland ah,taasoo aysan waqtigan jaanis badan u heynin dawladda Faderaalku.
Dadka falanqeeya siyaasadda ayaa rumeysan in go`aanka Siciid Deni kutagay Kismaayo uu yahay dhabarjab weyn oo ku dhacay dawladda Faderaalka, gaar ahaana halkaas ay sawir wadajir ah kusoo galeen siyaasiin miisaanweyn ku leh arrimaha gudaha ee dalka.
Axmed Madoobe ayay uga dhigan tahay booqashada dhigiisa Puntland mi horey u dhaqaajinaysa damaciisa Madaxweyne-nimada ee la doortay 22kii Augustna ka dhigaysa mid sharciyad huwan, taas oo ay dad badan kasoo horjeedaan.
Siciid Deni ayay u tahay safarkiisii koowaad, balse su`aalo badan ayaa dulhoganaya marka laga tago diidmadiisii uu ka diiday dawladda Faderaalka in ay wax u yeeriso, haddana caqabadaha kataagan gudaha Kismaayo xal u halistooda ayay dad badan ku eegayaan sida u wajahayo.
Laakiin arrimaan oo dhan waa caqabad u taala dawladda Faderaalka Soomaaliya, wax kasta oo ay ku sameysay Axmed Madoobe wuu ka baxsaday hadda,laakiin waxay u aragtaa in ay wali haysto fursado kale oo ay xal uga gaari karto waxyaabaha taagan oo ah in ay wada hadalgasho.
Falanqeeyashu ma aaminsana in ay dawladda Soomaaliya waqtigan aadi doonto wada hadal, balse taasi badalkeeda waxay xooga saaraysaa dhismaha Jubbaland 2aad oo halisteedu tahay in ay dhinacyadu dagaalamaan, waxaana Xukuumadda u haray wax ka yar 2 sanno.
Waxaa lagaarey xilligii la bedililahaa raisal wasaaraha kheyr sababahaan awgood:
1-waa nin yar oo wax khibrad ah u lahayn siyaasadda Soomaaliya .
2-waa nin careysan , fudud oo wax dumista u sahlan tahay .
3-Wax taageero ah kama heesto qabiilada Soomaaliya
4-wuxuu si xad dhaaf ah ugu takrifaley hantida qaranka.
5-wuxuu cadaadis iyo cagajugleyn kuhayaa golayaasha dawladda
wasiirada xattaa ma eegikaraan.
6-Waa nin isla weyn oo kibir iyo qab uu ka buuxo.
Hadaba suaasha isweydiinta mudan waxay tahay farmaajo ma ku dhacaa in uu yiraahdo ninkaan istag , jawaabta waa maya . Laakiinse hawshaan waxay u taal barlaamaanka waa haddii rajo laga qabo in dalka wax looqabto .